Adguard ပရီမီယံ Apk - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Cracked ပရီမီယံ Pro ကို Key ကို - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » Adguard ပရီမီယံ Apk – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Cracked ပရီမီယံ Pro ကို Key ကို
အားဖြင့် softkelo | အောက်တိုဘာလ 4, 2018
Adguard ပရီမီယံ Apk သင့်ရဲ့ browser များအနေဖြင့်မလိုလားအပ်သောကြော်ငြာတွေကိုရှောင်ရှားရန်ပရီမီယံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်သည်သင်၏ browser ကနေကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါလျှင်သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ကနေအခမဲ့ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်နိုင်သည်.
Adguard Cracked Apk သငျသညျတခါနှင့်သင့်ပါဝင်မှုမရှိဘဲမှာတင်အသားတင်စာမျက်နှာများကိုစစ်ထုတ်ပေးတဲ့အားကိုးနှင့်စီမံခန့်ခွဲဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူကမ်းလှမ်း. Adguard Apk အဆိုပါနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာများအားလုံး၏တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရရှိ, အန္တရာယ်များဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လုပ်ကွက်တင်, ယခုအခါဂီတကိုလုံးဝလူတိုင်းအတွက်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများခွင့်ပြုလို့မရဘူး.
Adguard ပရီမီယံ Apk Download
AdBlock ပရီမီယံ ရပ်ကွက်အတွင်း VPN ကိုနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုအမြစ်အခွင့်ထူးမရှိဘဲ site ကိုဧည့်သည်ကိုစီစစ်ရန်စေသည်. ဒီ VPN ဆာဗာ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပိုဆောင်းဝေးလံဆက်သွယ်မှုအတွက်မလိုအပ်လည်းမရှိဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ device ကိုမှလက်ျာဘက် embedded ဖြစ်ပါတယ်. app ကို run နေပြီးနောက်, ဒါကြောင့်ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်တိတ်တဆိတ်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းရှိသမျှကိုအင်တာနက် bandwidth ကိုအထဲက filter မှ offevolved စတင်သည်. Adguard ပရီမီယံ key ကိုယနေ့ကဒီဆော့ဖ်ဝဲကို Download လုပ်ကြော်ငြာစောင့်တပ်ဖွဲ့၏လိုလားသူဗားရှင်းကိုသက်ဝင်ရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: မြန်နှုန်း Payback Crack များအတွက်လိုအပ် – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် NFS Cracked
အင်တာနက်ဝဘ်စာမျက်နှာဆောင်ရွက်နေစဉ်, Adguard Pro ကို Apk ချက်ချင်းတော်တော်များများသောအရာတို့ကိုမ:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phishing ၏ဒေတာဘေ့စနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆိုက်များအတိုက်အခံတစ်ဦးက web page ကိုစမ်းသပ်.
အမည်မသိအရင်းအမြစ်များကိုနေ download အကဲဖြတ် apps များ.
ကြီးမားတဲ့ file တွေကိုဒေါင်းလုပ်အတူ Fixed ကိစ္စများ (Google က updates များကို Play အပါအဝင်)
TCP connections ကို၏တိုးတက်လာသောကိုင်တွယ်
"အင်-Level settings ကို" ကို Added အကျဉ်းချုပ်လယ်ကွင်း
အနိမျ့-အဆင့်ချိန်ညှိမှုများအပိုင်းဖို့ "pref.vpn.capture" preference ကို Added
"အင်-Level ဦးစားပေး" လျှောက်ထားခြင်းနှင့်အတူ Fixed အနေနဲ့ပြဿနာ
ယင်းကို manual proxy ကို mode မှာ DNS ကို cache ကိုအတူ Fixed အနေနဲ့ပြဿနာ
icons cache ကို app ကို cache ကိုပြောင်းရွှေ့
Adguard ၏မဆိုယခင်ဗားရှင်း uninstall
အောက်တွင်အားအဆိုပါ Links များ မှစ. patch APK ကို Download လုပ်ပြီး Install
SAM ကိုထုတ်လွှင့် PRO 2018.8 လိုင်စင် Key ကို & အပြည့်အဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Crack
AVG လုံခြုံ VPN ကို 1.5.664 အက်ကွဲပြီးတော့ Serial Number အပြည့်အဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
MiniTool Partition Wizard 10.2.3 ရိုက်သံ & လိုင်စင် Key ကိုအပြည့်အဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
Lightworks Pro ကို 14.5 ရိုက်သံ & လိုင်စင် Key ကိုအပြည့်အဝအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်
← မြန်နှုန်း Payback Crack များအတွက်လိုအပ် – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် NFS Cracked Freemake Video Converter Key ကို – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဒေါင်းလုပ် Activation Code ကိုတံဆိပ်ရစေခြင်း Remove →
အက်ဆစ် Pro ကို7Keygen - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လို့ Torrent + ရိုက်သံ